Yakachipa Yakakwira Kukwanisa Organic & Compound Fertilizer Granulator Machine Vanopa uye Fekitori | YiZheng
Ndeipi Nyowani Type Organic & Compound Fertilizer Granulator?
Iyo Nyowani Type Organic & Compound Fertilizer Granulator michina yegranulation inowanzoshandiswa mukugadzira mafotireza emakomponi, mafetiraiza, manyowa ehupenyu, inodzorwa mafetiraiza ekuburitsa, nezvimwewo .. Inokodzera mikuru inotonhora uye inopisa kupisa uye yakakwira, yepakati uye yakaderera yevasungwa inogadzirwa nefotereza.
Iyo huru yekushanda modhi ndeye granulation yakanyorova granulation Kuburikidza neuwandu hwemvura kana hwemvura, fetiraiza yakakosha inoitwa nemushonga mushure mekugadziriswa musilinda. Pasi pemamiriro emvura yakatarwa, kutenderera kwesilinda kunoshandiswa kugadzira zvidimbu zvinoburitsa Simba rinopwanya kusangana mumabhora.
Chii chitsva chemubatanidzwa fetiraiza granulator inoshandiswa?
Izvi Nyowani Type Organic & Compound Fertilizer Granulator chigadzirwa chitsva chepamutemo chakagadzirwa nekambani yedu uye neKurima Mashini Research Institute. Muchina uyu haugone chete kugadzira zvinhu zvakasiyana zvehunhu, kunyanya kune fiber zvinhu izvo zvinonetsa kugadzirwa nemidziyo yakajairwa, senge mashanga ezvirimwa, zvisaririra zvewaini, musara wehowa, zvisaririra zvemishonga, ndove yemhuka zvichingodaro. Iyo granulation inogona kuitwa mushure mekuvira, uye zvakare inogona kuwanikwa zvirinani mhedzisiro yekugadzira gorosi kune acid uye yemasipare sludge.
Zvimiro zveNew Type Organic & Compound Fertilizer Granulator
Iyo bhora yekuumba mwero inosvika 70%, iro bhora simba rakakwira, pane hushoma hwezvinhu zvekudzoka, iyo yekudzosera zvinhu saizi idiki, uye pellet inogona kugadziriswazve granulated.
Nyowani Type Organic & Compound Fertilizer Granulation Production Line Pano tinogona kukupa
10,000-300,000 matani / gore NPK remubatanidzwa fetiraiza yekugadzira mutsara
10,000-300,000 matani / gore organic organic fetiraiza yekugadzira
10,000-300,000 matani / gore hombe kusanganisa manyowa ekugadzira mutsara
10,000-300,000 matani / gore Amoniya-acid maitiro, Urea yakavakirwa remubatanidzwa fetiraiza yekugadzira mutsara
10,000-200,000 matani / gore mupfudze wemhuka, chikafu chekudya, sludge uye mamwe marara ekurapa marara uye granulation michina
Nyowani Type Organic & Compound Fertilizer Granulator Vhidhiyo Ratidza
Nyowani Type Organic & Compound Fertilizer Granulator Model Sarudzo
Pashure: Disc Organic & Remubatanidzwa Fertilizer Granulator
Zvadaro: Nyowani Type Organic & Compound Fertilizer Granulator Machine